စာကလေးတစ်ပုဒ် (သို့) စောင်ကလေး တစ်ထည် - Thutazone
စာကလေးတစ်ပုဒ် (သို့) စောင်ကလေး တစ်ထည်
By ThutammPosted on July 9, 2018
ဒီနှစ် ဆောင်းတွင်းက တော်တော်အေးတယ်။ မနက် မနက်ဆိုရင် ဆိုင်ကယ်စီးရတာ အရမ်းအေးတာပဲ။ ည (၈)နာရီလောက်ဆိုရင် အအေးဓာတ်က ၀င်လာပြီ။ ညအိပ်ရင်လည်း ထူထူထဲထဲလေးဝတ်ပြီး ‘စောင်’ သေချာခြုံအိပ်ရတယ်။အပြင်မှာလည်း နှင်းတွေ ကျနေတယ်။ တရုတ်အနွေးထည်ထူထူနဲ့ ဘောင်းဘီပွပွကို ၀တ်ပြီး အိပ်ရာ ၀င်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့  ဆောင်းတစ်ည တစ်ရေးနိုးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့  နံဘေး အိပ်မောကျနေတဲ့ ‘ချစ်ဇနီး’ကို ကြည့်မိတယ်။ သူက တရုတ်စောင်ကြီးကို ခြုံ၊ ခေါင်းစွပ်တွေ၊ ခြေ အိတ်တွေနဲ့  အိပ်မောကျနေလိုက်တာ။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျော်နေလိုက်တာ။၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကလည်း ထူထူထဲထဲ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ ။ ကျွန်တော့်ကို ကျောပေးပြီး ဒူးကလေးကိုကွေးလို့ အိပ်နေလိုက်တာများ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့် စိတ်တွေဟာ ဟိုး…..လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀)ကျော်ဆီကို ရောက်သွားမိတယ်။
သူနဲ့ ကျွန်တော် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်။ နိုဝင်ဘာပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာ…။ ဆောင်းညများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မင်္ဂလာဦး အချိန်ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဘာကိုမှ မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ ကာလပါ။ ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မင်္ဂလာဦးပစ္စည်း များများစားစား မရှိသေးပါ။ ကျွန်းကုတင်လေးတစ်လုံးရယ်၊ ခေါင်းအုံးလေး တစ်ခုရယ်၊ဘုတလင်စောင်ကလေး တစ်ထည်ရယ်၊ သင်ဖြူးအစုတ်ကလေး တစ်ချပ်ရယ်၊ ပိတ်ခြင်ထောင်ကလေး တစ်လုံးရယ်နဲ့  မင်္ဂလာဦးကာလတွေကို ရင်ခုန်လှိုက်မောခဲ့ရတယ်။
သေတ္တာအစုတ်ကလေး တစ်လုံးရယ်၊ ချိန်းခဏခဏ ကျတတ်တဲ့ စက်ဘီးကလေးတစ်စီးရယ်၊အင်္ကျီအဖြူလေးနှစ်ထည်၊ခပ်နွမ်းနွမ်းကချင်ပုဆိုးလေး နှစ်ထည်ရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရအောင်ယူထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရယ်… ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့  ပထမဆုံး မင်္ဂလာဦးပစ္စည်းတွေပါ။
ဒီဇင်ဘာ ဆောင်းကလည်း ချမ်းလိုက်တာ။ ညညအိပ်ရင် ခေါင်းအုံးကလေးတစ်ခုကို အတူတူအုံးပြီး”ဘုတလင်စောင်”ကို နှစ်ယောက်အတူ ခြုံခဲ့ကြတယ်။သိပ်အေးလို့ကျွန်တော်က ကွေးလိုက်ရင် သူများ စောင်လွတ်သွားလေမလားဆိုတဲ့ ညှာတာစိတ်နဲ့  ဘယ်လောက်ချမ်းချမ်းကွေးပြီး မအိပ်ခဲ့ဘူး။
သူကလည်း…. ဒီလိုပါဘဲ။ ဒီ ‘စောင်ကလေး’ တစ်ထည်ကို လုပြီး မခြုံရက်ဘူး။ သူ့ ရဲ့  ကိုယ်ငွေ့ နွေးနွေးလေးရယ်၊ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးရယ်အသားချင်းထိလို့ ဆောင်းညတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ နွေးနွေးအိအိခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဖက်ပြီးအိပ်စက်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လောက်ပဲအေးအေး စောင်တစ်ထည်ရဲ့ အောက်မှာ ပုဆိုးအစုတ်ကလေးကို ၀တ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့  ထဘီခပ်နွမ်းနွမ်းကို ၀တ်ထားတဲ့သူနဲ့  နွေးထွေးမှုကို နှလုံးသားနဲ မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရှာခဲ့ကြတယ်။ရခဲ့ကြတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ ဆောင်းညများကို ရင်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိနေမိတယ်။ ‘စောင်ကလေး’ တစ်ထည်ရဲ့ အောက်မှာ ညှာတာခြင်းတွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ၊ ကိုယ်ချင်းစာခြင်းတွေ၊ စာနာစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တယ်။ ညတစ်ရေးနိုးရင်လည်း သူများ ‘စောင်’ လွတ်နေမလားလို့ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့  သတိတရ ကြည့်မိတယ်။ သူလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ နေမှာပါ။
အေးမြတဲ့ ဆောင်းညတွေမှာ ဒီ ‘စောင်ကလေးတစ်ထည်’ကြောင့် သူနဲ့  ကျွန်တော့်ကြားမှာ နားလည်မှုတွေ ရခဲ့ကြတယ်။ မပြည့်စုံသေးတဲ့ ကာလမို့လို့ အခက်အခဲတွေ့ တိုင်း စိတ်ဝမ်းမကွဲဘဲ ပျော်ရွှင်စာ ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်။ စောင်ကလေး တစ်ထည်အောက်မှာ ရင်ခုန်ခြင်းတွေ၊ ကြည်နူးခြင်းတွေ၊ကြင်နာခြင်းတွေနဲ့  မျှော်လင့်ချက်တွေကို အတူတူ အိပ်မက်,မက်ခဲ့ကြတယ်။ သူ့ ရဲ့ အိပ်မက်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့  အိပ်မက်ပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့  အိပ်မက်ဟာလည်း သူ့ ရဲ့  အိပ်မက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းအုံးတစ်ခုပေါ်မှာ အတူတူ ခေါင်းချပြီး အိပ်စက်ခဲ့ကြရတာဆိုတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း တူခဲ့ကြတယ်။
ထမင်းစားရင်လည်း စားပွဲခုံ အ၀ိုင်းသေးသေးလေးနဲ့ အတူ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လို့ စားခဲ့ကြတယ်။ ဘဲဥတစ်လုံးကို ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့  ချက်ပြီး တစ်ယောက်တစ်ခြမ်း အတူတူ စားခဲ့ကြတုန်းက ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်ကို သူ့ ပန်းကန်၊ ကိုယ့်ပန်းကန် အပြန်အလှန်ထည့်ပေးလို့ ကြည်နူးခဲ့ရတယ်။ စက်ဘီးအစုတ်ကလေးရဲ့  ကယ်ရီယာပေါ်မှာ သူက ထိုင်၊ ကျွန်တော့်ခါးကိုဖက်၊ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။ မပြည့်စုံခြင်းမှာလည်း ကြည်နူးစရာတွေ၊ ပျော်ရွှင်စရာတွေရှိမှန်း အခုမှ တွေးမိတယ်။ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားပီပီ ညနေစာကို လက်ဖက်သုပ်နဲ့  အတူစားခဲ့ကြတာ တွေးကြည့်ရင် လွမ်းမောစရာပါ။
အခုတော့… ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီ။ သူကလည်း သူ့ စောင် သူခြုံလို့၊ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်စောင် ကျွန်တော်ခြုံလို့။ သူကလည်း သူ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ သူ၊ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ခေါင်းအုံးနဲ့  ကျွန်တော်။ သူကလည်း တရုတ်ဘောင်းဘီ အထူကြီးနဲ့ ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ လိုပါပဲ။ ‘ခြောက်ပေ’ ပတ်လည် ခုတင်တစ်ခုပေါ်မှာ အတူအိပ်ပြီး အနေဝေးနေကြတယ်။ သူနဲ့  ကျွန်တော့်ကြားမှာ ကိုယ်ရနံ့ သင်းသင်းလေးတွေ၊ ရင်ငွေ့  နွေးနွေးတွေ၊ တိုးတိုးညင်းညင်း ရင်ခုန်သံတွေ မကြားရတာ အတော်ကြာခဲ့ပေါ့။ အိပ်မောကျနေတဲ့ သူ့ ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ကို ညှာတာစရာ၊ စာနာစရာ မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အသိကြောင့် ခက်ခက်ထန်ထန် အိပ်နေသလားလို့တောင် ထင်နေမိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ နားလည်မှုပေးစရာ မလိုတော့ဘူးကိုး။
ကျွန်တော်ကလည်း အလုပ်ရှုပ် ၊ သူကလည်း အလုပ်ရှုပ် ၊ ထမင်းလက်ဆုံ မစားရတာကြာပါပြီ။ တကယ်လို့ ထမင်းဝိုင်းမှာ ဆုံဖြစ်ကြရင်လည်း အလုပ်အကြောင်း၊ ငွေအကြောင်း ၊ အောင်မြင်မှုအကြောင်း ၊ ကိုယ့်ထက်သာသူတွေကို သူ့ ထက်သာအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်စတိုးဆိုင်က ပစ္စည်းက ပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၊ ရွှေဈေးက ဘယ်လို….၊ မြေဈေးအိမ်ဈေးက ဘယ်လို… ဒါတွေပဲ ပြောဖြစ်ကြတယ်။
အောင်မြင်မှုနောက်ကို လိုက်ရင်း၊ ငွေနောက်ကို လိုက်ရင်း၊ သူနဲ့  ကျွန်တော့်အကြားမှာ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့  အနှစ်သာရတွေ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သွားသလို ခံစားလာရတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ နောက်မှာ သူ့ ရဲ့ အိပ်မက်နဲ့  ကျွန်တော့်ရဲ့  အိပ်မက် မတူကွဲပြားနေတာကို သတိမပြုမိခဲ့ကြဘူး၊ ခုတင်တစ်လုံးပေါ်မှာ အတူတူအိပ်ပြီး ယုံကြည်ချက်တွေ အတူတူ မဖြစ်ကြတော့ဘူး။ ခုတင်တစ်လုံးပေါ်မှာ အတူတူအိပ်ပြီး အိပ်မက်တွေ မတူတော့တဲ့ဘ၀ကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာခဲ့ကြရတယ်။
မပြည့်စုံတဲ့ အချိန်တုန်းက အ၀တ်တွေကို သူက လျှော်တယ်။ ကျွန်တော်က မီးပူတိုက်တယ်။ ထမင်းစားပြီးရင် သူက ပန်းကန်ဆေးတယ်။ ကျွန်တော်က စားပွဲခုံ သိမ်းတယ်။ သူက တံမြက်စည်း လှဲတယ်။ ကျွန်တော်က အမှိုက်သိမ်းတယ်။ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ။
အခုတော့ ဒီအလုပ်တွေကို အိမ်ဖော်တွေက လုပ်ကြတယ်။
မပြည့်စုံသေးတဲ့ အချိန်တုန်းက စက်ဘီးတစ်စီးပေါ်မှာ ကျွန်တော်ကနင်းတယ်။ သူက တွန်းတယ်။ ကုန်းအတက်တွေ့ ရင် ကျွန်တော့်ကို အမောပြေအောင် သူက သီချင်းဆိုပြတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း သူနဲ့ အတူလိုက်ပြီး သီချင်းတွေအတူဆိုခဲ့တယ်။ ကုန်းအဆင်းကို ရောက်ရင်လည်း ကျွန်တော့်ခါးကို သူက ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားတယ်။ အခုတော့ သူကလည်း သူ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့သူ၊ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ဆိုင်ကယ်နဲ့  ကျွန်တော်…။ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာ ဘာများလဲလို့ မတွေးမိနိုင်လောက်အောင်ကို ငွေနောက်၊ စီးပွားရေးနောက်၊ အောင်မြင်မှုနောက်ကို ကျွန်တော်တို့ လိုက်နေကြတယ်။
သူကတော့ အိပ်နေလိုက်တာ…။ အပြင်မှာက နှင်းတွေကျနေတယ်။ ရင်ခုန်စရာ ဆောင်းညတွေဟာ အခုတော့ အထီးကျန်တဲ့ ဆောင်းညတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပြီလေ။ ငွေကြေးတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတော့ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘ၀တစ်ခုရဲ့  ပြည့်စုံမှုအစစ်မဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုဘ၀ဆိုတာ ငွေတွေပုံပေးရုံနဲ့ မပြည့်စုံပါဘူး။ တိုက်ကြီးတွေ၊ ကားကြီးတွေ၊ ခြံဝင်းကြီးတွေနဲ့  အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ကို တည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။နွေးထွေးမှုတွေ၊စာနာမှုတွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ၊ ညှာတာစိတ်တွေနဲ့  တည်ဆောက်ရတယ်ဆိုတာအခုမှ တွေးမိတယ်။
ကျွန်တော့် စာသင်ခန်းနဲ့ ကပ်လျက် လေးထပ်တိုက်ပိုင်ရှင် တရုတ်မကြီးပြောတဲ့စကားကို ဖောက်သည်ချပါရစေ။
”ဦးဘုန်း….ငါ မပျော်ဘူး။ ဟိုတုန်းက ပျော်တယ်။ အခု မပျော်ဘူး။ ဟိုတုန်းက မှော်ထဲမှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနေရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဆင်းရဲတုန်းက ယောင်္ကျားတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် သစ္စာရှိတယ်။ ငွေကြေးလည်း ချမ်းသာလာရော သစ္စာမရှိတော့ဘူး။ ငါ့သားသမီးတွေလည်း အတူတူပဲ။ ငါဆင်းရဲတုန်းက သူတို့ အရမ်းလိမ္မာကြတယ်။ ငါတို့လည်း ချမ်းသာလာရော သူတို့လည်း မိုက်မဲကုန်ကြတယ်။
ငါ့ယောင်္ကျားဆို ငွေနောက်လိုက်နေတာ။ ခရီးသွားနေတာ။ အခု ငါတိုက်တွေ ကားတွေ၊ ငွေတွေနဲ့ အထီးကျန်သလို ခံစားရတယ်။ ငွေရှိရင် ပြည့်စုံပြီလို့ ငါထင်ခဲ့တာ။ ငွေရှိတိုင်း မပြည့်စုံဘူး။ အောင်မြင်မှုရတိုင်း မပြည့်စုံဘူး။ ‘စိုင်းထီးဆိုင်’ သီချင်း ကြားဖူးလား။ ‘ရေဆန်မှာချော ၊ ရေစုန်မှာ မော’ အဲဒီသီချင်း ငါ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ရေဆန်တုန်းက အတူတူ လှော်ခဲ့ကြတယ်။ မောတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျော်တယ်။ ရေစုန်ကိုလည်း ကြုံရော သူကလည်း လှော်ချင်ရာလှော်။ ငါကလည်း လှော်ချင်ရာလှော်နဲ့။ ဘ၀ကြီးက အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ ငါ့ကို တိုက်ကြီးတွေ၊ ကားကြီးတွေနဲ့  နေရလို့ ပျော်တယ်များ ထင်နေသလား။ ငါမပျော်ဘူး။ အရင်တုန်းက ဘ၀ဟာ ငွေမပြည့်စုံပေမဲ့ငါ ပျော်တယ်”
အခုတော့… တစ်ယောက်ကို စောင်တစ်ထည်စီနဲ့  ဒီဇင်ဘာရဲ့  ဆောင်းညများမှာ သူနဲ့ ကျွန်တော် ‘စိတ်ချင်းဝေး’နေ ကြတယ်။
ပြည့်စုံမှုမှာလည်း အထီးကျန်မှုတွေ ရှိနေပါလား။ အောင်မြင်မှုမှာလည်း ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ပါလား။ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပါလား။ မပြည့်စုံမှုမှာရှိတဲ့ ကြင်နာခြင်း၊ နွေးထွေးခြင်း၊ စာနာခြင်း၊ ညှာတာခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊ မေတ္တာစိတ်တွေကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကျေနပ်ကြရအောင်ဗျာ။
ဒါကြောင့် စောင်ကလေးတစ်ထည်အောက်မှာ တူညီတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဆောင်းညတွေကို တမ်းတရင်းနဲ့  အဲဒီနေ့ညက အိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူးဗျာ။
ဆရာ ဦးဘုန်း (ဓာတု) ၏ အဖေ့အိမ် စာအုပ်မှ စောင်ကလေးတစ်ထည် ၀တ္ထုတိုဖြစ်ပါသည်။
စောငျကလေး တဈထညျ (unicode)
ဒီနှဈ ဆောငျးတှငျးက တျောတျောအေးတယျ။ မနကျ မနကျဆိုရငျ ဆိုငျကယျစီးရတာ အရမျးအေးတာပဲ။ ည (၈)နာရီလောကျဆိုရငျ အအေးဓာတျက ဝငျလာပွီ။ ညအိပျရငျလညျး ထူထူထဲထဲလေးဝတျပွီး ‘စောငျ’ သခြောခွုံအိပျရတယျ။အပွငျမှာလညျး နှငျးတှေ ကနြတေယျ။ တရုတျအနှေးထညျထူထူနဲ့ ဘောငျးဘီပှပှကို ဝတျပွီး အိပျရာ ဝငျရတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ဆောငျးတဈည တဈရေးနိုးမှာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ နံဘေး အိပျမောကနြတေဲ့ ‘ခဈြဇနီး’ကို ကွညျ့မိတယျ။ သူက တရုတျစောငျကွီးကို ခွုံ၊ ခေါငျးစှပျတှေ၊ ခွေ အိတျတှနေဲ့ အိပျမောကနြလေိုကျတာ။ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျကွီး အိပျပြျောနလေိုကျတာ။ဝတျထားတဲ့ အဝတျအစားတှကေလညျး ထူထူထဲထဲ လုံလုံခွုံခွုံနဲ့။ ကြှနျတေျာ့ကို ကြောပေးပွီး ဒူးကလေးကိုကှေးလို့ အိပျနလေိုကျတာမြား။ ဒီနရောမှာ ကြှနျတေျာ့ စိတျတှဟော ဟိုး…..လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး (၂၀)ကြျောဆီကို ရောကျသှားမိတယျ။
သူနဲ့ ကြှနျတျော ၁၉၈၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ (၂၆) ရကျနမှေ့ာ မင်ျဂလာဆောငျကွတယျ။ နိုဝငျဘာပွီးတော့ ဒီဇငျဘာ…။ ဆောငျးညမြားကို ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ မင်ျဂလာဦး အခြိနျပေါ့။ အဲဒီတုနျးက ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ ဘာကိုမှ မပိုငျဆိုငျသေးတဲ့ ကာလပါ။ ကြှနျတျော ပိုငျဆိုငျတဲ့ မင်ျဂလာဦးပစ်စညျး မြားမြားစားစား မရှိသေးပါ။ ကြှနျးကုတငျလေးတဈလုံးရယျ၊ ခေါငျးအုံးလေး တဈခုရယျ၊ဘုတလငျစောငျကလေး တဈထညျရယျ၊ သငျဖွူးအစုတျကလေး တဈခပျြရယျ၊ ပိတျခွငျထောငျကလေး တဈလုံးရယျနဲ့ မင်ျဂလာဦးကာလတှကေို ရငျခုနျလှိုကျမောခဲ့ရတယျ။
သတ်ေတာအစုတျကလေး တဈလုံးရယျ၊ ခြိနျးခဏခဏ ကတြတျတဲ့ စကျဘီးကလေးတဈစီးရယျ၊အင်ျကြီအဖွူလေးနှဈထညျ၊ခပျနှမျးနှမျးကခငျြပုဆိုးလေး နှဈထညျရယျ၊ နောကျပွီးတော့ ကြှနျတျောခဈြတဲ့၊ ကြှနျတျော ကိုယျတိုငျ ရအောငျယူထားတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရယျ… ဒါတှဟော ကြှနျတေျာ့ဘဝရဲ့ ပထမဆုံး မင်ျဂလာဦးပစ်စညျးတှပေါ။
ဒီဇငျဘာ ဆောငျးကလညျး ခမျြးလိုကျတာ။ ညညအိပျရငျ ခေါငျးအုံးကလေးတဈခုကို အတူတူအုံးပွီး”ဘုတလငျစောငျ”ကို နှဈယောကျအတူ ခွုံခဲ့ကွတယျ။သိပျအေးလို့ကြှနျတျောက ကှေးလိုကျရငျ သူမြား စောငျလှတျသှားလမေလားဆိုတဲ့ ညှာတာစိတျနဲ့ ဘယျလောကျခမျြးခမျြးကှေးပွီး မအိပျခဲ့ဘူး။
သူကလညျး…. ဒီလိုပါဘဲ။ ဒီ ‘စောငျကလေး’ တဈထညျကို လုပွီး မခွုံရကျဘူး။ သူ့ရဲ့ ကိုယျငှနှေ့ေးနှေးလေးရယျ၊ကြှနျတေျာ့ရဲ့ကိုယျငှနှေ့ေးနှေးရယျအသားခငျြးထိလို့ ဆောငျးညတှကေို ကြျောဖွတျခဲ့ရတယျ။ သူ့ရဲ နှေးနှေးအိအိခန်ဓာကိုယျလေးကိုဖကျပွီးအိပျစကျခဲ့ရတယျ။ဘယျလောကျပဲအေးအေး စောငျတဈထညျရဲ့အောကျမှာ ပုဆိုးအစုတျကလေးကို ဝတျထားတဲ့ ကြှနျတျောနဲ့ ထဘီခပျနှမျးနှမျးကို ဝတျထားတဲ့သူနဲ့ နှေးထှေးမှုကို နှလုံးသားနဲ မွငျအောငျကွညျ့ပွီးရှာခဲ့ကွတယျ။ရခဲ့ကွတယျ။ ကြေးဇူးတငျစရာကောငျးတဲ့ ဆောငျးညမြားကို ရငျထဲမှာ မှတျမှတျထငျထငျရှိနမေိတယျ။ ‘စောငျကလေး’ တဈထညျရဲ့အောကျမှာ ညှာတာခွငျးတှေ၊ မတ်ေတာတရားတှေ၊ ကိုယျခငျြးစာခွငျးတှေ၊ စာနာစိတျတှေ ဖွဈပျေါနခေဲ့တယျ။ ညတဈရေးနိုးရငျလညျး သူမြား ‘စောငျ’ လှတျနမေလားလို့ ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ သတိတရ ကွညျ့မိတယျ။ သူလညျး ကြှနျတေျာ့လိုပဲ နမှောပါ။
အေးမွတဲ့ ဆောငျးညတှမှော ဒီ ‘စောငျကလေးတဈထညျ’ကွောငျ့ သူနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကွားမှာ နားလညျမှုတှေ ရခဲ့ကွတယျ။ မပွညျ့စုံသေးတဲ့ ကာလမို့လို့ အခကျအခဲတှတေို့ငျး စိတျဝမျးမကှဲဘဲ ပြျောရှငျစာ ဖွရှေငျးခဲ့ကွတယျ။ စောငျကလေး တဈထညျအောကျမှာ ရငျခုနျခွငျးတှေ၊ ကွညျနူးခွငျးတှေ၊ကွငျနာခွငျးတှနေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို အတူတူ အိပျမကျ,မကျခဲ့ကွတယျ။ သူ့ရဲ့အိပျမကျဟာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အိပျမကျပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အိပျမကျဟာလညျး သူ့ရဲ့ အိပျမကျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ခေါငျးအုံးတဈခုပျေါမှာ အတူတူ ခေါငျးခပြွီး အိပျစကျခဲ့ကွရတာဆိုတော့ မြှျောလငျ့ခကျြတှလေညျး တူခဲ့ကွတယျ။
ထမငျးစားရငျလညျး စားပှဲခုံ အဝိုငျးသေးသေးလေးနဲ့အတူ တဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျကွညျ့လို့ စားခဲ့ကွတယျ။ ဘဲဥတဈလုံးကို ခရမျးခဉျြသီးနဲ့ ခကျြပွီး တဈယောကျတဈခွမျး အတူတူ စားခဲ့ကွတုနျးက ပြျောစရာကောငျးလိုကျတာ။ ခရမျးခဉျြသီးအနှဈကို သူ့ပနျးကနျ၊ ကိုယျ့ပနျးကနျ အပွနျအလှနျထညျ့ပေးလို့ ကွညျနူးခဲ့ရတယျ။ စကျဘီးအစုတျကလေးရဲ့ ကယျရီယာပျေါမှာ သူက ထိုငျ၊ ကြှနျတေျာ့ခါးကိုဖကျ၊ ရငျခုနျစရာ ကောငျးလိုကျတာ။ မပွညျ့စုံခွငျးမှာလညျး ကွညျနူးစရာတှေ၊ ပြျောရှငျစရာတှရှေိမှနျး အခုမှ တှေးမိတယျ။ မန်တလေးသူ၊ မန်တလေးသားပီပီ ညနစောကို လကျဖကျသုပျနဲ့ အတူစားခဲ့ကွတာ တှေးကွညျ့ရငျ လှမျးမောစရာပါ။
အခုတော့… ပွညျ့စုံတဲ့ ဘဝတဈခုကို ပိုငျဆိုငျနပွေီ။ သူကလညျး သူ့စောငျ သူခွုံလို့၊ ကြှနျတျောကလညျး ကြှနျတေျာ့စောငျ ကြှနျတျောခွုံလို့။ သူကလညျး သူ့ခေါငျးအုံးနဲ့သူ၊ ကြှနျတျောကလညျး ကြှနျတေျာ့ခေါငျးအုံးနဲ့ ကြှနျတျော။ သူကလညျး တရုတျဘောငျးဘီ အထူကွီးနဲ့။ ကြှနျတျောကလညျး သူ့လိုပါပဲ။ ‘ခွောကျပေ’ ပတျလညျ ခုတငျတဈခုပျေါမှာ အတူအိပျပွီး အနဝေေးနကွေတယျ။ သူနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကွားမှာ ကိုယျရနံ့သငျးသငျးလေးတှေ၊ ရငျငှေ့ နှေးနှေးတှေ၊ တိုးတိုးညငျးညငျး ရငျခုနျသံတှေ မကွားရတာ အတျောကွာခဲ့ပေါ့။ အိပျမောကနြတေဲ့ သူ့ရဲ့မကျြနှာပျေါမှာ ကြှနျတေျာ့ကို ညှာတာစရာ၊ စာနာစရာ မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အသိကွောငျ့ ခကျခကျထနျထနျ အိပျနသေလားလို့တောငျ ထငျနမေိတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ နားလညျမှုပေးစရာ မလိုတော့ဘူးကိုး။
ကြှနျတျောကလညျး အလုပျရှုပျ ၊ သူကလညျး အလုပျရှုပျ ၊ ထမငျးလကျဆုံ မစားရတာကွာပါပွီ။ တကယျလို့ ထမငျးဝိုငျးမှာ ဆုံဖွဈကွရငျလညျး အလုပျအကွောငျး၊ ငှအေကွောငျး ၊ အောငျမွငျမှုအကွောငျး ၊ ကိုယျ့ထကျသာသူတှကေို သူ့ထကျသာအောငျ ဘာလုပျရမလဲ ဆိုတဲ့အကွောငျး၊ ဘယျစတိုးဆိုငျက ပစ်စညျးက ပိုပွီးကောငျးတယျဆိုတဲ့ အကွောငျး ၊ ရှဈေေးက ဘယျလို….၊ မွဈေေးအိမျဈေးက ဘယျလို… ဒါတှပေဲ ပွောဖွဈကွတယျ။
အောငျမွငျမှုနောကျကို လိုကျရငျး၊ ငှနေောကျကို လိုကျရငျး၊ သူနဲ့ ကြှနျတေျာ့အကွားမှာ အိမျထောငျရေးရဲ့ အနှဈသာရတှေ အဓိပ်ပာယျမဲ့သှားသလို ခံစားလာရတယျ။ ပိုငျဆိုငျမှုရဲ့နောကျမှာ သူ့ရဲ့အိပျမကျနဲ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အိပျမကျ မတူကှဲပွားနတောကို သတိမပွုမိခဲ့ကွဘူး၊ ခုတငျတဈလုံးပျေါမှာ အတူတူအိပျပွီး ယုံကွညျခကျြတှေ အတူတူ မဖွဈကွတော့ဘူး။ ခုတငျတဈလုံးပျေါမှာ အတူတူအိပျပွီး အိပျမကျတှေ မတူတော့တဲ့ဘဝကို ရောကျမှနျးမသိ ရောကျလာခဲ့ကွရတယျ။
မပွညျ့စုံတဲ့ အခြိနျတုနျးက အဝတျတှကေို သူက လြှျောတယျ။ ကြှနျတျောက မီးပူတိုကျတယျ။ ထမငျးစားပွီးရငျ သူက ပနျးကနျဆေးတယျ။ ကြှနျတျောက စားပှဲခုံ သိမျးတယျ။ သူက တံမွကျစညျး လှဲတယျ။ ကြှနျတျောက အမှိုကျသိမျးတယျ။ ပြျောစရာကောငျးလိုကျတာ။
အခုတော့ ဒီအလုပျတှကေို အိမျဖျောတှကေ လုပျကွတယျ။
မပွညျ့စုံသေးတဲ့ အခြိနျတုနျးက စကျဘီးတဈစီးပျေါမှာ ကြှနျတျောကနငျးတယျ။ သူက တှနျးတယျ။ ကုနျးအတကျတှရေ့ငျ ကြှနျတေျာ့ကို အမောပွအေောငျ သူက သီခငျြးဆိုပွတယျ။ ကြှနျတျောကလညျး သူနဲ့အတူလိုကျပွီး သီခငျြးတှအေတူဆိုခဲ့တယျ။ ကုနျးအဆငျးကို ရောကျရငျလညျး ကြှနျတေျာ့ခါးကို သူက ကဈြကဈြပါအောငျ ဖကျထားတယျ။ အခုတော့ သူကလညျး သူ့ဆိုငျကယျနဲ့သူ၊ ကြှနျတျောကလညျး ကြှနျတေျာ့ဆိုငျကယျနဲ့ ကြှနျတျော…။ အိမျထောငျရေးရဲ့ အဓိပ်ပါယျဆိုတာ ဘာမြားလဲလို့ မတှေးမိနိုငျလောကျအောငျကို ငှနေောကျ၊ စီးပှားရေးနောကျ၊ အောငျမွငျမှုနောကျကို ကြှနျတျောတို့ လိုကျနကွေတယျ။
သူကတော့ အိပျနလေိုကျတာ…။ အပွငျမှာက နှငျးတှကေနြတေယျ။ ရငျခုနျစရာ ဆောငျးညတှဟော အခုတော့ အထီးကနျြတဲ့ ဆောငျးညတှေ ဖွဈနခေဲ့ပွီလေ။ ငှကွေေးတှေ၊ အောငျမွငျမှုတှေ၊ ပိုငျဆိုငျမှုတှဟော အတိုငျးအတာ တဈခုထိတော့ အဓိပ်ပာယျရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘဝတဈခုရဲ့ ပွညျ့စုံမှုအစဈမဟုတျပါဘူး။ မိသားစုဘဝဆိုတာ ငှတှေပေုံပေးရုံနဲ့ မပွညျ့စုံပါဘူး။ တိုကျကွီးတှေ၊ ကားကွီးတှေ၊ ခွံဝငျးကွီးတှနေဲ့ အိမျထောငျရေးဘဝကို တညျဆောကျလို့မရပါဘူး။နှေးထှေးမှုတှေ၊စာနာမှုတှေ၊ မတ်ေတာတရားတှေ၊ ညှာတာစိတျတှနေဲ့ တညျဆောကျရတယျဆိုတာအခုမှ တှေးမိတယျ။
ကြှနျတေျာ့ စာသငျခနျးနဲ့ကပျလကျြ လေးထပျတိုကျပိုငျရှငျ တရုတျမကွီးပွောတဲ့စကားကို ဖောကျသညျခပြါရစေ။
”ဦးဘုနျး….ငါ မပြျောဘူး။ ဟိုတုနျးက ပြျောတယျ။ အခု မပြျောဘူး။ ဟိုတုနျးက မှျောထဲမှာ ဆငျးဆငျးရဲရဲနရေတာ ပြျောစရာကောငျးတယျ။ ဆငျးရဲတုနျးက ယောင်ျကြားတှဟော အိမျထောငျရေးအပျေါ သစ်စာရှိတယျ။ ငှကွေေးလညျး ခမျြးသာလာရော သစ်စာမရှိတော့ဘူး။ ငါ့သားသမီးတှလေညျး အတူတူပဲ။ ငေါ ဆငျးရဲတုနျးက သူတို့ အရမျးလိမ်မာကွတယျ။ ငါတို့လညျး ခမျြးသာလာရော သူတို့လညျး မိုကျမဲကုနျကွတယျ။
ငါ့ယောင်ျကြားဆို ငှနေောကျလိုကျနတော။ ခရီးသှားနတော။ အခု ငါတိုကျတှေ ကားတှေ၊ ငှတှေနေဲ့ အထီးကနျြသလို ခံစားရတယျ။ ငှရှေိရငျ ပွညျ့စုံပွီလို့ ငါထငျခဲ့တာ။ ငှရှေိတိုငျး မပွညျ့စုံဘူး။ အောငျမွငျမှုရတိုငျး မပွညျ့စုံဘူး။ ‘စိုငျးထီးဆိုငျ’ သီခငျြး ကွားဖူးလား။ ‘ရဆေနျမှာခြော ၊ ရစေုနျမှာ မော’ အဲဒီသီခငျြး ငေါ အရမျးကွိုကျတယျ။ ရဆေနျတုနျးက အတူတူ လှျောခဲ့ကွတယျ။ မောတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပြျောတယျ။ ရစေုနျကိုလညျး ကွုံရော သူကလညျး လှျောခငျြရာလှျော။ ငါကလညျး လှျောခငျြရာလှျောနဲ့။ ဘ၀ကွီးက အဓိပ်ပာယျမရှိပါဘူး။ ငါ့ကို တိုကျကွီးတှေ၊ ကားကွီးတှနေဲ့ နရေလို့ ပြျောတယျမြား ထငျနသေလား။ ငါမပြျောဘူး။ အရငျတုနျးက ဘဝဟာ ငှမေပွညျ့စုံပမေဲ့ငါ ပြျောတယျ”
အခုတော့… တဈယောကျကို စောငျတဈထညျစီနဲ့ ဒီဇငျဘာရဲ့ ဆောငျးညမြားမှာ သူနဲ့ကြှနျတျော ‘စိတျခငျြးဝေး’နေ ကွတယျ။
ပွညျ့စုံမှုမှာလညျး အထီးကနျြမှုတှေ ရှိနပေါလား။ အောငျမွငျမှုမှာလညျး ကရြှုံးမှုတှနေဲ့ပါလား။ ပိုငျဆိုငျမှုမှာလညျး လိုအပျခကျြတှနေဲ့ပါလား။ မပွညျ့စုံမှုမှာရှိတဲ့ ကွငျနာခွငျး၊ နှေးထှေးခွငျး၊ စာနာခွငျး၊ ညှာတာခွငျး၊ နားလညျခွငျး၊ မတ်ေတာစိတျတှကေို မွငျအောငျကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ကနြေပျကွရအောငျဗြာ။
ဒါကွောငျ့ စောငျကလေးတဈထညျအောကျမှာ တူညီတဲ့ အိပျမကျတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ဆောငျးညတှကေို တမျးတရငျးနဲ့ အဲဒီနညေ့က အိပျမပြျောခဲ့ပါဘူးဗြာ။
ဆရာ ဦးဘုနျး (ဓာတု) ၏ အဖအေိ့မျ စာအုပျမှ စောငျကလေးတဈထညျ ဝတ်ထုတိုဖွဈပါသညျ။
Posted in Feeling, ThinkingTagged feeling, thinking
Previous post တခေတ်တခါက မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး (သို့) ပန်းကန်စက် ဦးသော်
Next post ဥာဏ်ထိုင်းစေမယ့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ ၁၀ ချက်